Igazi elivela ingquza - Isiboniso okwethusayo
Igazi elivela ingquza ngesikhathi sokuzikhulula noma ngaphandle kokubheka ke - i uphawu ezethusayo ukuthi kungase kubonise khona inqubo sokugembula okwenzeka eduze ingquza noma ikholoni.
I yezimbangela ezivame kakhulu ngopha ingquza yilezi:
- emifantwini Anal - esinye sezifo ezivamile proctological akha igebe noma ukulimala mucosal ku ikati onqenqemeni iqonde we ingquza. Ngokuvamile-ke esenzelwa ngemuva yesifo sohudo, ukuqunjelwa kanye "sedentary" yokuphila. emifantwini Anal ngokuvamile ukuphulukisa bebodwa, kubalulekile ukuba kulesetayelekile kwesitulo bese ulungise indlela yokuphila. Nokho, lolu hlobo kwenzeka ukuthi isifo bangaba ezingamahlalakhona. Okuqhubekayo eside ekulimazeni ukukhubazeka sezinyawo ekhona icuphe yisishiso, ukubukeka esivuthayo ukulunywa, kanye ubuhlungu uboniswe ingquza. Igazi elivela ingquza ngesikhathi esifanayo kungaba izinhlobo ezahlukene - ukusuka iminonjana elondolo eshelelayo igazi phakathi noma ngemva ukunyakaza wamathumbu. Kungenzeka futhi, futhi Ukukhetha amahlule ne indle, ukubukeka igazi ndawo, kuzwakala ku zangaphansi ngaphandle kwesizathu esibonakalayo, noma lapho uzivocavoca.
- Hemorrhoids - isifo okuhlale libhekene iziyaluyalu emithanjeni hemorrhoidal nokubukeka ISIZINDA eduze ingemuva. Izinto eziyingozi ezingabangela i zihlanganisa abantu abaphethwe ukukhuluphala, ezinamaphutha indlela odla okuholela "sedentary" yokuphila noma okuphambene nalokho kokuzama ngokuzehlukanisa ngokweqile imithwalo. Lesi sifo kungaba umngane nokukhulelwa zenzeka ngenxa yokucinana ka ngemithambo umbungu okhulayo. Ukopha kusukela le ingquza - iyona engcono kanye uphawu oyinhloko izifo ezifana hemorrhoids. Igazi ngesikhathi esifanayo has a abahlukene umbala obomvu. Ngo ukuvuvukala okwathatha isikhathi eside kangako ngaphansi kwesikhumba ingquza akhiwa ukuvuvukala okubuhlungu (ifindo) dark umbala onsomi, ekuletheni eziningi ngokuphazamisa futhi okubangela ubuhlungu obunzima. Ukopha kungenzeka okujula ezahlukene, kodwa ngaso sonke isikhathi ninokuningi nombala ofanayo abomvu. Ukuba khona amahlule amnyama into evamile lesi sifo. Hemorrhoids opha kaningi phakathi acute ukuvuvukala.
- wamathumbu izimila nazo libhekene ukubukeka ngopha ingquza. Kulesi simo kwegazi ingquza kungaba okujula ezahlukene. Ukungabikho ukulunywa, esivuthayo ubuhlungu ingozi enkulu. Kungenxa yalezi zizathu, abantu abaningi bazicabangela off kudokotela wezifo bese anqume izimbangela ebangela ukopha. Kubalulekile nokukhumbula ukuthi ngokushesha iyoba ukutholwa isifo, aba maningi amathuba alulame ngokugcwele.
- Izifo ezihambisana yokuphazamiseka yenqubo ye igazi ekunqandeni noma igazi, ingabagulisa ukubukeka igazi.
Igazi elivela ingquza njalo kuwuphawu isifo emzimbeni, yingakho uma ithola amamaki ayo ku zangaphansi noma emshinini toilet paper, ungalibali ukuvakashela onguchwepheshe. Kuphela uzokwazi kutholakale imbangela isifo kweqiniso. Njengoba yaziwa, usizo ngesikhathi esifanele usizo lwezokwelapha ukugwema nemiphumela engathi sína futhi ngezinye izikhathi emibi kakhulu.
Amachashaza kusukela induna
Appendicitis okungamahlalakhona: Izimpawu kubantu besifazane, uphethwe, ukuphathwa
Iphimbo umntwana: izimpawu
Ukwelashwa sinusitis ekhaya ngemva kokuvakashela udokotela
Madonna di Campiglio: resort, indawo, izibuyekezo, izithombe
Coral Hills Marsa Alam 5 * (Egypt): ngezibuyekezo nezithombe
Iphethini noboya uwumnikazi wenkampani kanye nezincomo for ekuhlanganiseni
I-rollers yezingane iyisipho esingcono kakhulu kwengane!
Legend amabalazwe. Izimpawu amabalazwe ngokomzimba kwendawo
"Svyatogor" ( "Moskvich Svyatogor"): Ukucaciswa, ukubuyekezwa, futhi intengo (isithombe)
Indlela ukushintsha isizinda ku-Photoshop?
Kuthiwani uma iphuphu ijuba wasala ngaphandle abazali?
Ezombusazwe njengento cwaningo esigabeni samanje ekukhuleni komphakathi
Lapho ungakhululeka ehlobo ngokuvamile nezingane